Akụkọ - Covid-19 ewetawo nnukwu mmetụta na nnwale na ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ
Na ọkara nke mbụ nke 2020, mberede mberede nke coVID-19 tinyere ụlọ ọrụ na-ere ahịa zuru ụwa ọnụ, gụnyere ụlọ ọrụ uwe, na mmetụta dị ukwuu na nnwale. N'okpuru nduzi siri ike nke Kọmitii Kọmitii CPC, ọnọdụ nke igbochi ọrịa na ịchịkwa ọrịa na China anọgidewo na-aka mma, mmepụta na usoro ndụ eweghachila na ngwa ngwa, ahịa ndị ahịa na-aga n'ihu na-agbake nwayọ, ndị ahịa ji nke nta nke nta mụbaa njikere na obi ike ha na emefu ego. Site na Jenụwarị ruo Juun na 2020, ọnụ ahịa ndị ahịa China nke ruru ijeri 17,23 trillion, gbadata afọ 11.4% na afọ na pasent 7.6 na-erughị na nke mbụ. N'etiti ha, ahịa ngwa ahịa buliri nwayọ. N’ọnwa June, a napụtara ihe ire ahịa mkpọtaghachi ihe ruru yuan trillion 3 n'otu oge ahụ n'afọ gara aga. A gbasoro mgbake ahụ, ahịa ndị ahịa na-aga n'ihu na-eburu nwayọọ nwayọọ, ndị na-azụ ahịa wee dịkwuo njikere ma nwee obi ike imefu. Site na Jenụwarị ruo Juun na 2020, ọnụ ahịa ndị ahịa China nke ruru ijeri 17,23 trillion, gbadata afọ 11.4% na afọ na pasent 7.6 na-erughị na nke mbụ. N'etiti ha, ahịa ngwa ahịa buliri nwayọ. N’ọnwa June, a napụtara ihe ire ahịa mkpọtaghachi ihe ruru yuan trillion 3 n'otu oge ahụ n'afọ gara aga.
N'ihi ọnọdụ dị mgbagwoju anya ugbu a, uwe dị oké mkpa na ndụ kwa ụbọchị. Anyị na-esi ọnwụ na-emepe emepe n'èzí egwuregwu. N'adịghị ka uwe ndị okenye, ndị na-azụ ahịa ga-atụle ihe ndị dị ka nkasi obi, mma, akara, na ijuju mgbe ha na-azụta uwe ụmụaka, ọ bụghị naanị "ịdị mma". Nke a bụ n'ihi na ụmụaka nọ n'usoro uto ma nwee ihe ndị dị elu achọrọ maka uwe chiri anya, nke ga-enwerịrị nkasi obi n'emeghị ahụike。
Anyị ụlọ ọrụ bụ a mba ọzọ ahia ụlọ ọrụ na okenye ukporo uwe na ụmụaka uwe dị ka ndị na-eduga na ngwaahịa, waterproof na breathable ala akwa, na-atọkwa rụọ, fashionable style design.We kwenyesiri ike na "ọ dịghị ihe kasị mma, naanị mma", ma na-ebi ndụ nhọrọ na ntụkwasị obi nke egwuregwu n'èzí